COVID-19 foomamka ka Saarista
Xaq ma u leeyahay?
Xal Lacag la'aan ah oo ku saabsan Si looga Hortaggo Guri Ka Saarida Xilliga Cudurka COVID-19
Buuxi foomka ka dibna ka sii nuqul mulkiilaha guriga aad u jirto
Hab Fudud oo Xor ah
Eeg inaad xaq u leedahay oo buuxi foom.
La soo bax (download) ama daabac foomka
Sii foomka mulkiilaha guriga aad ku jirto.
Ku saaban Xalkan
Kani waa xalka ay dhistay A2J Tech si looga caawiyo kiraystayaasha inay soo saaraan cadeyn ka hortagi karta ka saarida guryahooda ilaa iyo Bisha Juun 30, 2021. Baaqaani wuxuu lagama maarmaan u yahay Amarka ay soo saartay Xarunta Xakamaynta Cudurku ee kireystayaasha ka siinaya badbaadin ka saarista. Qalabkani wuxuu faa'iido u leeyahay kireystayaasha Maraykanka oo dhan.
Tixgeli: Tani macnaheedu maahan inaadan bixin kiradaada. Waxaad heli doontaa waqti yar si aad uga fogaato ka saaristaada. Ugu dambeyntiina waxaad bixin doontaa dhammaan kirooyinkii hore
Nala soo xiriir​
Afeef: akhbaarta lagu bixiyey shabakadan (website), ma aha, looguma talagalin inay noqoto talo dhanka sharciga ah. Ee dhamaan akhbaarta, waxa ay xambaarsan tahay iyo waxa laga heli karo rugtan waxaa loogu talagalay ujeedooyin akhbaar guud inay noqdaan uun kaliya ah.